सलह किराकाे परिचय र प्रकाेप « Salleri Khabar
प्रकाशित मिति : 27 May, 2020
२०–४० दिन सम्मका किरालाई होपर भनिन्छ, जुन हरियो रंगको हुन्छ र पखेटा बिहीन यो अवस्थामा सो किराहरुले २ देखि १० से. मि. को प्वाल खनेर ३० देखि ७० सम्म अण्डाहरु पार्दछन् । उपयुुक्त समय मिलेमा २ हप्तामै अण्डाबाट किरा निस्कने सक्ने हुन्छ र शत प्रतिशत बाँच्न सक्ने क्षमता समेत हुने गर्दछ । तर पनि किराहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उत्तम समय यहीं मानिन्छ । त्यसपछि बढेर उड्न थाल्ने चरणमा पुग्दछ । २–४ महिनामा जब यसले परिपक्वता पाउँदछ र यसको रंग हरियोदेखि खैरो र गुलाबी हुँदै वयस्क हुँदा फेरि पहेँलो हुने गर्दछ । जुन अवस्थामा यसको नियन्त्रण लगभग असम्भव छ भन्दा पनि हुन्छ ।
सामान्यतया एउटा सलह किराले आफ्नो वजन बराबरको (करिब २ ग्राम) खाना खान सक्छ । एक वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ८० लाखसम्म किराहरु हुन सक्ने समेत प्रमाण पुष्टि भएको छ । यी किराहरु दैनिक ९० माईल (१५० किमि) सम्मको दुरी पार गर्न र ३ कि. मि सम्मको उचाईमा उड्न सक्दछन् । किराको एउटै झुण्डले पृथ्वीको झण्डै २० प्रतिशत भूभाग ओगट्ने क्षमता राख्दछन् । एक दिनमा यो किराले करिब ३५,००० मान्छे बराबरको खाना खान सक्ने र जुनको महिनामा यो बढेर १,७५,००,००० सम्म पुग्ने अनुमान छ ।
२० औँ शताब्दितिर सलह किराको झुण्ड रुप घट्दै गएको समेत थियो । हरेक १० वर्षमा सोलार गतिविधि कम हुने र यसबाट आउने लौकिक किरणले किरा तथा भाईरसको जीवनचक्रमा केही फरकपना ल्याएर यसको प्रकोप बढेको पाइन्छ । यसका साथै १०० वर्षमा सन् २०२० को सोलार गतिविधि सबैभन्दा कम रेकर्ड गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न मानवीय क्रियाकलापहरुले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो र जैविक तवरबाट चाँडै यस किराको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने आधुनिक मान्यता रहेको छ । अफ्रिका हुँदै इजिप्ट, जोर्डन र इजरायल जस्ता देशहरुमा लामो समयसम्म यस किराको प्रकोप देखिएको थियो भने यसले झण्डै २.५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति समेत पुर्याएको थियो । खाद्य तथा कृषि संगठनले अफ्रिकामा सलह किरा व्यवस्थापनलाई सुरु गरेको कार्यक्रममा अरबाैँको लगानी गर्दा पनि यो वर्ष अफ्रिकामा ५ करोड मान्छे खाद्यसङकटमा पर्ने बताइएको छ । यसको प्रकोपमा परेका देशहरु तल नक्सामा देखाइएको छ ।
सलह किराको प्रकोपलाई कम गर्नको लागि विभिन्न पहलहरु भईरहेका पनि छन् । ती मध्ये केही उपायहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
१.विभिन्न उपकरणहरुको माध्यमबाट थोरै मात्रामा अर्गानोफोस्फेट रसायनहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
४.टायर बाल्ने, जालको प्रयोगबाट छोप्ने, खाडल बनाएर हाल्ने जस्ता क्रियाकलाप बाट पनि केही हदसम्म यस किराको प्रकोपलाई कम गर्न सकिन्छ ।
८.भारतले यो बेला मालाथियोन विषादीको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने, पाकिस्तानमा डाईजिनन र फिप्रोनिल अनि यसका साथै अफ्रिकामा ग्रीन मसल भन्ने विषादीको प्रयोग सबभन्दा सफल देखिएको छ ।
भर्खरै मात्र भारतमा २६ वर्ष पश्चात् सलह किराको प्रकोप देखिएको समाचार आइरहेको छ । भारतको राजस्थान, पन्जाब, हरियाना र मध्यप्रदेशमा फैलिरहेको पाइएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, सलह किराले फौजीको रुप लिएर जटिल चुनौती सिर्जना गरी भारतीय कृषि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने कुरा समेत बताएको छ । वैज्ञानिकहरुको अनुसार भारत र पाकिस्तानको सीमानामा असमान मनसुन र समुन्द्री साईक्लोनको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको पुष्टि भएको छ । यो किरा अहिले ईरान हुँदै पाकिस्तान र भारतमा आइसकेको छ र नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना समेत प्रवल देखिन्छ । यसका लागि चाँडै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ । तसर्थ, यस किराको प्रकोप कम गर्नको लागि तुरुन्तै आवश्यक कदमहरु चालेर भोलिको दिनमा मानव जीवन लगायत कृषि प्रणालीको अस्तित्व बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ ।
जलस्रोतको उपयोग गर्दा त्यसले प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्रकृति, साइज,
अहिलेको यस कोरोना संक्रमणको वैश्विक महामारीको अवस्थामा गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधिहरु बढाएर धेरै भन्दा धेरै